Shiinaha bannaanka-aan-caddeyn u ahayn xayeysiinta acrylic calaamadaha soo saarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha. Zhengcheng
Sanduuqa nalka gabi ahaanba waa la xiray, 100% biyo ma leh, oo laga soocay uumiga biyaha, waxaana loo isticmaali karaa si caadi ah maalmaha roobka iyadoo aan saameyn ku yeelan tuubada LED-ka ee ku dhex jirta. Waxyaabaha looxa, fududahay in la nadiifiyo. Naqshad qaabaysan, oo si sahlan loo rakibo.
Magaca badeecada: Bannaanka hore ee laydhka iftiimiya boodhadhka iftiinka dukaanka hore
1. Biyo-la'aan iyo Boodh-caddeyn
Sanduuqa iftiinka ee keydinta tamarta ee Zhengcheng wuxuu qaataa sanduuq gaar ah oo si buuxda uxiran oo isku xidha jirka si loo hubiyo in booska gudaha ee sanduuqa nalka uu yahay mid hawo badan leh oo gebi ahaanba ka go'da uumiga biyaha, boodhka, iyo kaneecada. Marka laga hadlayo isha iftiinka, waxaan qaadaneynaa habka furitaanka dhinaca, daboolka daloolka waxaa lagu xirayaa dabool gaar ah oo caag ah, kaas oo ku habboon beddelka tuubada Iftiinka iyo hubinta nadaafadda isha iftiinka iyo golaha wasiirada.
2. Muuqaalka santuuqa iftiinka saxeexdiisu waa fiican tahay, iftiinkuna waa siman yahay
Xaashida acrylic-tayo sare leh ayaa loo xushay si ay u sameyso calaamadaha sanduuqa iftiinka, dusha siman, midabka dhalaalaya oo buuxa, gudbinta iftiinka xoogan, soo bixida iftiinka lebiska.
3. Tuubo shatiyeysan, hab iftiin sare leh
Sanduuqa nalka wuxuu leeyahay tuubbo la dhex-dhexaadiyey, oo keydinaya tamarta iyadoo weli ilaalinaysa dhalaalka sare. Intaas waxaa sii dheer, habka iftiinka horumarsan wuxuu ka dhigayaa isha iftiinka LED-ka mid ka tarjumaya oo dib loo isticmaalayaa.
4. Si adag loo xirxiray oo si ammaan ah loo raray
Si loo yareeyo waxyeelada ka dhalanaysa marka la rarayo alaabada, waxaan si adag u xirxiraynaa badeecada, waxaan ku xireynaa kartoon qaro weyn, ka dibna waxaan ku xoojineynaa xargaha alwaax ka baxsan kartoonka.
Hore: Dukaanka ku habboon dukaanka saxeexa hore ee Yonghui
Xiga: Bannaanka Iftiiminta Nalka Hore ee Dukaanka Laydhka Saxeexa
Vacuum Xayeysiinta Samaynta Calaamadaha
Saxeexa Xayeysiiska Kaalinta Gaaska
Bannaanka Saxeexa Xayeysiinta
Saxeex Farmashiyaha, Bannaanka Laydhka Bannaanka Saxeexa, Calaamadaha Xayeysiinta, Calaamadaha Iftiiminaya, Saxiixa Boodhka Nalalka Nalalka ah, Vacuum U samaynta Sanduuqa Nalalka Nalalka,